Lahateny nataon'ny Papa Ray Masina - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Ry Rahalahy ao amin’ny laharana maha-Eveka,
Misaotra anao, Andriamatoa Kardinaly, amin’ny teninao mirary ahy tonga soa amin’ny anaran’ireo rahalahintsika. Feno fankasitrahana ihany koa ny tenako satria tianao hambara tamin’ny teninao fa ny iraka izay heverintsika hiainana dia misandrahaka eo anivon’ireo toe-javatra mifanohitra : tany manankarena nefa fahantrana maro ; kolotsaina sy fahendrena nolovaina tamin’ireo razana izay mahatonga antsika hanome lanja ny aina sy ny hasin’ny olombelona, nefa koa eo ny fahitàna ny tsy fitoviana sy ny kolikoly. Sarotra ny asan’ny Mpiandry ondry ao anatin’ireo zava-misy ireo.
“Mpamafy fiadanana sy fanantenana”, izay no lohahevitra nofidiana ho an’ity fitsidihina ity, izay azo ho raisina tsara ho akon’ny iraka izay nankinina tamintsika. Fa isika tokoa dia mpamafy ary izay mamafy dia manao izany ao anatin’ny fanantenana ; ataony izany amin’ny fiankinany amin’ny heriny sy amin’ny firotsahany manokana, sady fantany anefa fa maro ireo fepetra izay tsy maintsy miaraka mba hitsimohan’ny voa sy hitomboany ka hahatonga azy ho tahom-bary ary farany vary mamokatra. Tsy miraviravy tànana ny mpamafy vizana sy feno ahiahy, tsy mitsoaka izy, na hoe mandoro ny tanimbariny rehefa misy zavatra tsy mandeha….Hainy ny miandry, matoky izy, zakainy ny tsy fahombiazan’ny vokany, kanefa tsy mitsahatra mitia io tanimbary nankinina aminy izy. Tsy mandositra koa izy, eny fa na dia alaim-panahy aza ka manankina izany amin’ny hafa.
Ny mpamafy dia mahafantatra ny taniny, “mitsapa” azy, “manambolo” azy ary manomana azy mba ho afaka hanome vokatra tsara. Sahala amin’ilay Mpamafy, isika Eveka dia voaantso hampiely ireo masombolin’ny finoana sy ny fanantenàna eto amin’ity tany ity. Amin’izany, tsy maintsy hampitomboina io “fanamboloana” izay manampy antsika hahafantatra azy tsaratsara kokoa, ary mahita ihany koa izay manohintohina, misakana na manimba ny voa. Noho izany, “ny mpiandry ondry, eo am-pandraisana ireo fahalalàna entin’ny siansa dia manan-jo ny hanome ny heviny momba izay rehetra mahakasika ny olombelona, rehefa fantatra fa ny asam-pitoriana ny vaovao mahafaly dia manetsika sy mitaky ny fanandratana feno ny olona tsirairay. Tsy azo atao intsony ny manambara fa ny fivavahana dia tokony hihanona amin’ny sehatry ny fiainan’ny tsirairay ary misy ihany izy fa natao hanomana ny fanahy ho any an-danitra. Fantatsika fa Andriamanitra dia maniry ny hahasambatra ny zanany, eto an-tany ihany koa, eny fa na dia voaantso amin’ny hafenoana mandrakizay azy izy ireo, satria nahary ny zava-drehetra izy “mba hahasambatra antsika” (1 Tim 6, 17), ary mba “hahasambatra ny olon-drehetra”. Ny vokatr’izany, ny fibebahana kristianina dia mitaky ny handinihina indray “amin’ny fomba manokana ireo zavatra rehetra mahakasika ny lamina ara-tsosialy sy ny fanatanterahana ny soa iombonana. Noho izany, tsy misy na iza na iza afaka hitaky amintsika fa avela hitokana any amin’ny aty fanahy miafina ao amin’ny olona ny fivavahana, ka tsy misy fiantraikany amin’ny fiainam-piaraha-monina sy ny fiainam-pirenena, sy tsy hiahy ny fahasalaman’ny rafitry ny fiaraha-monim-pirenena, ary tsy miteny manoloana ny zava-mitranga mahaliana ny olom-pirenena” (Fanentanana apostolika Ny hafalian’ny Evanjely, 182-183).
Fantatro fa maro ny antony mahatonga ny ahiahy ary anisan’izany, dia entinareo am-po ny andraikitra hiahy ny fahamendrehan’ireo rahalahinareo izay mangataka ny hanorina firenena tena miray hina hatrany sy mandroso, mirafitra amin’ireo andrim-panjakana mafy orina sy maharitra. Ny mpiandry ondry mendrika ny antsoina amin’izany anarana izany ve hikimpy maso amin’ny ireo fanamby atrehan’ireo mpiray tanindrazana aminy avy amin’ireo sokajy ara-tsosialy samihafa, n’inona n’inona fivavahana misy azy ? Ny mpiandry ondry, araka ny fomban’i Jesoa, ve mety tsy hiraharaha ireo fiainan’olona ankinina aminy ?
Ny lafiny maha-mpaminany mifamatotra amin’ny iraka ampanaovina ny Fiangonana dia mitaky, n’aiza n’aiza ary mandrakariva, ny fandanjalanjàna izay tsy mora amin’ny ankapobeny. Arak’izany, ny fiaraha-miasa matotra sy iainana amin’ny fahafahana eo amin’ny Fiangonana sy ny Fanjakana dia fanamby maharitra, satria tsy lavitra na oviana na oviana ny loza avy amin’ny firaisana tsikombakomba, indrindra rehefa mihavery ilay “toetra mitsikera” avy amin’ny evanjely. Rehefa mihaino mandrakariva izay ambaran’ny Fanahy Masina tsy ankijanona amin’ny Fiangonana isika (cf. Ap. 2, 7) dia ho afaka amin’ireo sakana ka hamoaka ilay tsimoky ny Evanjely mba hisian’ny fiaraha-miasa mamokatra miaraka amin’ny fanjakana eo am-pitadiavana ny soa iombonana. Ny fambara mazava amin’io fandanjalanjàna io dia ny fampidirana ao anatin’ny fitoriana ny evanjely ny fiahiana amin’ny fanafahana amin’ireo endrika rehetra isehoan’ny fahantrana : “(tsy vitan’ny )manome sakafo fotsiny ny olon-drehetra, na “ireo izay hanampy azy ireo hanana fiainana mendrika ny maha-olona”, fa ny olon-drehetra no mahafantatra ny fandrosoana amin’ireo lafiny rehetra”. Ny takian’izany dia ny hisian’ny fanabeazana, ny fahazoana fanampiana ara-pahasalamana, ary indrindra ny fahazoana asa, satria ao amin’ny fananana asa malalaka, mamoron-javatra, manosika amin’ny fandraisana anjara sy firaisan-kina no anehoan’ny olombelona sy hampivelarany ny hasin’ny fiainany. Ny karama ara-drariny dia manampy amin’ny fahazoana izay tena mifanojo amin’ireo soa hafa ampiasaina amin’ny fanao iombonana” (Fanentanana apostolique Ny hafalian’ny Evanjely, 192).
Lafiny iray hafa ao amin’ny asa pastoraly sahanintsika ny fiarovana ny olombelona. Raha te-ho Mpiandry ondry araka ny fon’Andriamanitra isika, dia isika no tsy maintsy ho lohalaharana amin’ny safidy hitory ny Evanjely amin’ireo mahantra : “Tsy tokony hisy fisalasalàna na fanazavana manamaivana izany hafatra efa mazava loatra izany”. Ankehitriny ary isan’andro vaky izao, “ny mahantra no mahazo tombon-tsoa manokana avy amin’ny Evanjely”, ary ny fitoriana ny evanjely, omena maimaim-poana azy ireo no famantaran’ny Fanjakan’Andriamanitra izay entin’i Jesoa. Tokony ambara tsy misy olakolaka fa misy fifandraisana tsy azo sarahina eo amin’ny finoantsika sy ny mahantra. Tsy ho avelantsika ho irery na oviana na oviana izy ireo” (ibid., 48). Raha lazaina amin’ny teny hafa, manana adidy manokana isika amin’ny fanakaikezana sy fiarovana ireo mahantra, ireo voailiky ny fiaraha- monina sy ireo madinika, ireo ankizy sy ireo olona tena maratra, ianjadian’ny fanjakazakàna sy ny fanararaotana.
Io tanimboly midadasika io dia tsy hoe efa voakapa sy voasorok’ilay toe-tsaina maha-mpaminany fotsiny fa miandry koa ilay voa nafafy tamin’ny tany ao anatin’ny faharetana kristianina, ka tonga saina ihany koa amin’izany fa tsy antsika ny fanaraha-maso sy ny andraikitra amin’ny fizotran’izany. Ny mpiandry ondry mamafy dia manao izay tsy hifehezana ny zava-drehetra, fa manome fahafahana sy sehatra amin’ny fandraisan’ny olona andraikitra izy, mamela ny voa hitombo amin’ny vanim-potoana samihafa ary tsy mitady ny hisian’ny lasitra iray ; tsy mitaky izay mihoatra ny azo ekena ary tsy manambany ireo vokatra izay kely kokoa raha tarafina eto ivelany. Izany tsy fivadihana amin’ny Evanjely izany dia mahatonga antsika ihany koa ho mpiandry ondry akaiky ny vahoakan’Andriamanitra, manomboka amin’ireo rahalahy pretra izay rahalahy tena akaiky antsika ary tokony hahazo ny fikarakarana manokana avy amintsika.
Volana vitsivitsy lasa izay no nizarako tamin’ireo Eveka italiana ny fiahiako an’ireo pretra mba ahafahan’izy ireo mahita ao amin’ny Evekany ilay endriky ny rahalahy sady zoky no ray izay mankahery sy manohana azy ireo amin’ny làlana alehany (cf. Lahateny ho an’ny Fivondronan’ny Eveka italiana, 20 mey 2019). Io no antsoina hoe ny maha-ray ara-panahy, izay manosika ny Eveka mba tsy hamela ny pretrany ho kamboty ary ray am-panahy azo “tsapain-tànana”, tsy amin’ny fahafahana mamoha ny varavarana amin’ireo pretra rehetra fotsiny, fa amin’ny fahavononany hitady azy ireo ihany koa mba hanampiany azy ireo raha sendra mandalo fotoam-pahasahiranana izy ireo.
Ao amin’ny hafaliana sy ny olana tsy azo sarahina amin’ny ministerany, ny pretra dia tokony hahita ao aminareo ilay endriky ny ray feno fahavononana mandrakariva ka mahay mankahery sy manohana azy ireo, mahay midera ny ezaka vitany ary manampy azy amin’izay fandrosoana mety ho tanterany. Ny Konsily Vatikana faharoa dia nanao fanamarihana manokana momba io teboka io : “tokony hotronin’ireo Eveka amin’ny fitiava-namana manokana ny pretra, satria ireto farany dia mizaka ny ampahan’ny andraikitr’izy ireo sy ny ahiahiny ary manolo-tena isan’andro amim-pahazotoana lehibe ; tokony ho raisina ho toy ny zanaka sy namana izy ireo, tokony ho vonona ny hihaino azy, hikolokolo miaraka aminy ny fifandraisana feno fitokisana ary mampiroborobo amin’izany ny pastoraly ankapobeny ao amin’ny Diosezy manontolo” (Kristy Tompo, 16).
Ny fiahiana ny tanimbary dia midika ihany koa fiandrasana amim-paharetana ireo fizotran-javatra; rehefa tonga ny fotoam-pijinjana, manao jery todika ny asan’ny mpiasa ny mpamboly. Izany dia mitaky asa maika aminareo, amin’ny maha-mpiandry ondry anareo, momba ny fanarahana sy ny fandanjalanjàna, indrindra amin’ny fiantsoan’Andriamanitra amin’ny fiainana voatokana sy ho pretra, ka izany dia zava- dehibe ahafahana miantoka ny fahamarinan’ireo fiantsoana ireo. Maro ny vokatra ary ny Tompo – izay tsy maniry afa-tsy mpijinja tena izy – dia tsy manaiky ny gejaina ao anatin’ny fomba mahazatra amin’ny fiantsoana sy fanentanana amin’ny fanoloran-tena maimaim-poana. Ny fanofanana ireo izay mirotsaka mba ho tonga pretra sy amin’ny fiainana voatokana dia natao indrindra mba hiantoka ny fahamatorana sy ny fanadiovana ny faniriana. Mikasika an’izay, ao anatin’ny toe-tsaina nanilo ny Fanaingàna apostôlika Gaudete et Exsultate no tiako hanoritana fa ny fiantsoana fototra dia ny fiantsoana ho amin’ny fahamasinana, fa raha tsy misy an’io dia tsy misy dikany ireo antso hafa ary “izany fahamasinana izany no endrika tena tsara isaloran’ny Fiangonana” (n° 9). Deraiko ny ezaka ataonareo mba hiantohana ny fanofanana ireo mpiasa tena izy sy masina ho an’ny vokatra marobe ao amin’ny sahan’ny Tompo.
Izany ezaka izany dia tokony hitatra ihany koa ao amin’ny tontolo midadasika misy ireo lahika ; voairaka ihany koa ireo lahika ho an’ny vokatra, voaantso izy ireo mba handray anjara amin’ny fanjonoana sy hahafoy ny haratony sy ny fotoanany “amin’ny fanaovana asan’apostoly amin’ny endriny maro na ao amin’ny Fiangonana na eo amin’izao tontolo izao” (Konsily Vatikana II, Asan’apostoly ataon’ny Lahika, 9). Miaraka amin’ny fivelarany, ny fijeriny sy ny olana misy ary ny fiovàna ao aminy, izao tontolo izao no sehatra manokana amin’ny asan’apostoly ka ao ny lahika no voaantso hiasa amim- pahafoizan-tena sy amin’ny toe-tsaina tompon’andraikitra, sady hitondra ny tsimoky ny Evanjely. Noho izany antony izany dia tiako ny midera ny fandraisanareo andraikitra amin’ny maha-mpiandry ondry anareo amin’ny fanofanana ireo lahika mba tsy ho avela irery izy ireo amin’ny iraka sahaniny amin’ny maha-fanasin’ny tany sy fahazavan’izao tontolo izao azy, ka ho afaka hitondra ny anjara birikiny amin’ny fanavaozana ny fiaraha-monina sy ny Fiangonana eto Madagasikara.
Ry rahalahy, ireo andraikitra rehetra tontosaina ao amin’ny tanimbolin’ny Tompo dia mametraka fanamby ho antsika mba hanana fo sy saina mivelatra, hanesotra ny tahotra izay mamatotra sy handresy ny fakam-panahy te-hitokatokana : aoka ny fifanakalozan-kevitra ara-pirahalahiana eo aminareo, sy ny fifampizaràna ny fanomezam-pahasoavana ary ny fiaraha-miasa eo amin’ireo Fiangonana aty amin’ny sisiny eo anivon’ny Oseana Indiana mba ho làlan’ny fanantenàna. Ny fitoviana misy eo amin’ireo fanamby pastoraly toy ny fiarovana ny tontolo iainana ao anatin’ny toe-tsaina kristianina na ny olana ao amin’ny fifindra-monina dia mitaky fandinihina iombonana amin’ny fampirindran’asa amin’ny sehatra goavana mba ahafahana manana fijery mahomby.
Farany, dia tiako ny hanolotra fiarahabana amin’ny fomba manokana,amin’ny alàlanareo, an’ireo pretra, relijiozy lahy sy relijiozy vavy izay marary na vizana noho ny taonany mandroso ; miangavy anareo aho mba haneho amin’izy ireo ny fitiavako sy ny maha-akaiky ahy amin’izy ireo ao amin’ny vavaka ary miangavy anareo mba hiahy an’izy ireo amim-pitiavana ka hankahery azy ireo amin’ny iraka tsara tontosain’izy ireo amin’ny vavaka fitalahoana.
Vehivavy roa no miaro ity Katedraly ity : ao amin’ny lasapelina etsy akaiky esty no miala sasatra ny taolambalon’i Victoire Rasoamanarivo olon-tsambatra, izay nahavita soa, niaro ary nampiely ny finoana tamin’ny fotoan-tsarotra ; ary eo koa ny sarin’i Masina Maria Virjiny izay toa mamondrona ny zavatra rehetra amin’ny alàlan’ireo tànany misokatra amin’ny lohasaha sy ireo havoana. Ndeha isika hangataka amin’izy ireo mba hanokatra mandrakariva ny fontsika, mba hampianatra antsika ny fangorahana avy amin’ny fon-dreny izay tsapan’ny vehivavy sy Andriamanitra manoloana ireo olona adinon’izao tontolo izao ary hangataka isika mba hanampy antsika izy hamafy ny fiadanana sy ny fanantenàna.
Ary ho mariky ny fanohanako vokatry ny fo sy tsy mivadika no anomezako anareo ny tso-dranoko izay hitarina any amin’ny Diosezinareo.
Raha sitrakareo, aza manadino ny mivavaka sy mitaona ny olona hivavaka ho ahy !
Lahateny fiarahaban'i kardinaly Désiré Tsarahazana : https://www.lakroa.mg/item-1887_articles_dossier_18-lahateny-fiarahaban-i-kardinaly-dasira-tsarahazana.html